တိုင်း Pocket ခုနှစ်တွင် cell ဖုန်း | ကွန်ပျူတာနည်းပညာကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Viral စျေးကွက် Group မှ
တိုင်း Pocket ခုနှစ်တွင် cell ဖုန်း
ကွန်ပျူတာနည်းပညာကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > အားလုံး > တိုင်း Pocket ခုနှစ်တွင် cell ဖုန်း
ဆဲလ်ဖုန်း (ဆယ်လူလာတယ်လီဖုန်း) သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဦးဆောင်လမ်းပြလမ်းကိုအပေါ်ကိုကြီးစွာသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါပြီ. TODAY ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ပြောင်းလဲမှုကိုသာစဉ်ဆက်မပြတ်သည်အဘယ်မှာရှိ, ဆဲလ်ဖုန်းအသစ်သောနည်းပညာဆိုင်ရာ features တွေအများကြီးနှင့်အတူအဆင့်မြှင့်ပြီ. အဲဒီမှာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဆဲလ်ဖုန်းများအသုံးပြုခြင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ကြီးထွားခဲ့ယခုအခါနီးပါးဘယ်သူ့ကိုမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆဲလ်ဖုန်းရှိပါတယ်ထားပါတယ်. အဘယ်အရာကိုစစ်၏အချိန်မှာအသုံးပြုနိုင်မယ့်အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ် 1960 ခုနှစ်တွင်စတင်, it has now becomeasmall pocket device withahost of special features specially crafted for the common consumer. It satisfies more than the basic need to communicate. It isafashion statement an identity of self and it comes in hundreds of models. Nokia is the worlds largest manufacturer of cell phones followed by Motorola, Samsung က, BenQ, Siemens, Panasonic က, Philips, LG က, NEC, Sony Ericsson က, Fujitsu and many more. Apart from calling and texting, cell phones are used foravariety of purposes to keep contact information, to make task lists and daily schedules, browse mobile websites and check emails, ဂိမ်းကစား, watch video clips, listen to music, take pictures and much more. Also cell phones (ဆယ်လူလာတယ်လီဖုန်း) are easy to integrate with other electronic devices such as notebooks, music systems and etc. With the availability of infrared and Bluetooth technology,alot of wireless connectivity is possible, such as the use of wireless headphones. Also you can make your phone interact with your notebook without any physical connection. ဒါကြောင့်, what should you look for while purchasinganew cell phone (ဆယ်လူလာတယ်လီဖုန်း)? The points to consider include the service plan, price, အရွယ်, weight, features and technical specifications, compatibility with other devices, display screen resolution andavery important feature: battery life. The latest features offered by cell phones are mega pixel camera, wireless connectivity, modem capability, PC synchronization, music and video player andalot more. ယနေ့တွင်, you can access the World Wide Web through your cell phone (ဆယ်လူလာတယ်လီဖုန်း). To access internet, your cell phone has to be WAP-enabled. Many companies have created mobile compatible websites that make browsing on your phone very easy. You can get the latest news, stock quotes and game scores on the move through your cell phone. The advanced third-generation phones (3G phones) will soon storm the market and will have high-end graphical display that will enable better video conferencing and gaming experience. Everybody must follow basic cell phone (ဆယ်လူလာတယ်လီဖုန်း) etiquettes. Your mobile should not ring in public and disturb others. Sometimes mobile phones ring at odd instances like in movie theatres, မင်္ဂလာဆောင်, funerals, important official meetings, စသည်တို့ကို, and to top it the fancy ring tones disturb everybody else around you. You should keep your cell phone in the silent mode when you are atapublic place and you must never talk on the cell phone while driving. This might put you in trouble in many countries as there are heavy fines on cell phone misuse. ဆဲလ်ဖုန်း (ဆယ်လူလာတယ်လီဖုန်း) have become an intrinsic part of our lives that most of us cannot imagineasingle day without it. Ring tones, caller tunes, mobile gaming, ကင်မရာက, texting, MMS and video messaging, audio and video recording and viewing are still not enough. New technologies are developed often to reduce size and weight, increase speed, provideabetter user interface, to pack more high-definition features intoasmall pocket device. With GPS (global positioning system) စွမ်းအားခြင်း, cell phones have become so useful thataperson carrying one could be located toarange ofafew meters, anywhere on the globe! GPS cell phones are important devices in locating users in emergency situations, which allows emergency services to be quickly dispatched. တိုင်း Pocket ခုနှစ်တွင် cell ဖုန်း
categories: အားလုံး, အားကစားပြိုင်ပွဲ, နောက်ဆုံးရသတင်းများ, မှတ်ချက်စာအုပ်, pc, ဂိမ်းကစား Tags:: အတတ်ပညာ, မေးမြန်း, အသံ, ဘလူးတုသ်နည်းပညာ, ကွောငျ, ဆဲလ်ဖုန်း, ဆက်သွယ်ရေး, ဆက်, ကွန်နက်ရှင်, စားသုံးသူ, ဖန်တီး, အဆိုပါ, ebook, ebooks, အီးမေးလ်က, ဖက်ရှင်, အဆုံး, ဂိမ်း, game score, ဂိမ်း, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ, နာရီ, identi, အလုပ်သင်ဆရာဝန်, latest news, အသက်, စာရင်း, mag, စျေးကွက်, meetin, အစည်းအဝေး, mens, ပုံစံ, ရုပ်ရှင်, ဂီတ, သတင်း, နှင့်, notebook, ပေးကမ်း, အကွောငျး, pc, ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, ဖုန်းကို, စီမံကိန်း, ဂိမ်းကစား, quote, score, ဝန်ဆောင်မှု, န်ဆောင်မှုများ, ဖြေရှင်းနည်း, stock quotes, စံနစ်, နည်းပညာကို, tsu, ဗီဒီယို, wedding, အောင်မြင်, ကမ္ဘာကြီး, ကမ္ဘာကြီးကိုကျယ်ပြန့်
ဒီဗီဒီ & CD ကို Copy ကူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
ကုန်တင်ပွဲစား Software များ
သင်ကသင့်ရဲ့ငွေ Down ထားခင်မှာတစ်ဦးကကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်းကျောင်းမှမေးပါရန်မေးခွန်းလွှာ
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံန်ဆောင်မှုများအွန်လိုင်း Print – ဒါဟာမူလစာမျက်နှာမှာဓါတ်ပုံများပုံနှိပ်သန်းပိုလွယ် Is?
EverQuest Plat များအတွက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေခဲပြင် Giants
Dual-core Proxy Server ကိုအတူထမ်းထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရန်
နားကြပ် – ခြုံငုံသုံးသပ်
Inkjet ကျည်တောင့် ပြန်. ဖြည့်များအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ
တစျခုမှာနယူးတိုက်ဖျက်ရေးကိုစပမ် Software များ “G-Lock ကို Spamcombat”
အတိုင်ပင်ခံများအတွက် Microsoft က Dynamics ကို CRM Customization သို့မဟုတ်တတိယပါတီကုန်ပစ္စည်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
laptop Essentials! အကြောင်းစဉ်းစားပါငါးအခြေခံပညာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
အဘယ်မှာရှိ CS2 ကို Photoshop ကျူတိုရီရယ်ရှာပါရန်
အခမဲ့ MMORPG Aplenty!
desktop ကို (293)